Momba anay - Anhuang Electric Power Technology Co., Ltd.
ANHUANG TEKNOLOGIANA Herinaratra herinaratra CO., LTD
ANHUANG dia orinasa maoderina amin'ny famolavolana matihanina sy ny fanamboarana 3.6kV ka hatramin'ny 40.5kV Medium Voltage tariby accessories, terminal iraisana, singa elektrika ary kabinetra napetraka manontolo. Manana ny ekipa matihanina matihanina izahay hamolavola sy hanao ny lasitra irery, izay manampy ny mpanjifa hanao OEM na ODM. Niorina tamin'ny taona 2004 izahay, nanomboka ny asanay tamin'ny alàlan'ny alàlan'ny herinaratra avo lenta, ary avy eo nanomboka namokatra varatra arrester sy mpampifandray tariby. Ary koa, isika dia mihalehibe amin'ny fampandrosoana haingam-pandeha ho an'ny orinasanay noho ny fanaraha-maso avo lenta sy ny fitantanana mahomby. Ankehitriny ny entanay dia manome ny ankamaroan'ny orinasa any Shina ary manondrana any amin'ny firenena maro hafa, toa an'i Italia, Etazonia, Rosia, sns.
10kV-35kV Loadbreak connectors and bushloadload bushings izay ampiasaina betsaka amin'ny solika mitaingina diloilo mpandoto trafo, Deadbreak Connectors ary deabreak bushings izay be mpampiasa amin'ny GIS medium voltage switchgear na cable cable kabinet, Epoxy Bushings, Prefabricated Substation Spare part, Cold shrink tube ary Heat Shrink fantsona, Mpisambotra tselatra, Kabinetran'ny sampana tariby, singa lehibe amin'ny peratra, famindrana Loadbreak SF6, kojakoja fanovozam-pahefana antonony, mpiara-miasa tariby malefaka sns.
MISY SUBSIDIARIES ISIKA:
Manome vokatra avo lenta sy mora vidy izahay ho an'ny rafitra ilaina manerantany.
Ireo injeniera matihanina, teknisianina ary ekipa mpitantana anay dia mitazona hatrany ny fampanantenanay: ANHUANG dia tsy vitan'ny hoe manome vokatra avo lenta mahomby, fa manome koa kalitao avo lenta, mahomby, serivisy haingana ary fanohanana ara-teknika hahazoana antoka fa takian'ny mpanjifa.
Nahazo fanamarinana ho an'ny ISO9001, ISO1401, OHSAS18001 ny orinasanay.
Fahasalamana amin'ny asa
Ny orinasanay mifikitra amin'ny "herinaratra fiarovana, mamiratra mandrakizay" amin'ny maha-olombelona antsika orinasa. Vonona ny hiara-hiasa aminao hanorina ho avy tsaratsara kokoa.